XOG: Hoggaamiyeyaasha Waqooyi bari Kenya oo diiday natiijada tirakoobkii Kenya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Hoggaamiyeyaasha Waqooyi bari Kenya oo diiday natiijada tirakoobkii Kenya
XOG: Hoggaamiyeyaasha Waqooyi bari Kenya oo diiday natiijada tirakoobkii Kenya
Gaarisa (Halqaran.com) – Siyaasiyiinta gobolka Soomaalidu ay degto ee waqooyi bare Kenya, ayaa diiday natiijada laga soo saaray tirakoobkii dhawaan laga sameeyay dalka Kenya kaas oo siiyey Soomaalida tiro aan sax aheyn.
Hoggaamiyeyaasha Mandheera, Gaarisa iyo wajer ayaa shir jaraa’id oo ay ku qabteen Nayroobi waxa y ku sheeegeen in natiijada tira-koobka ee dhawaan la shaaciyay aysan ka turjumeyn xaqiiqada ka jirta deegaanadooda.
Waxay ay ku andacoodeen in natiijada ama tirada lagu sheegay saddexdaas gobol ay taahay mid lasoo karkariyay ama la soo dhoodhoobay.
Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya oo ka hadlay shirka jaraa’id ayaa sheegay in natiijada laga soo saaray gobollaadas aysan sax aheyn.
“ Natiijada lagu dhawaaqay ee ku aaddan gobolladaas ee tira-koobkii la qabatay 24/25 August 2019 lana soo gabagabeeyay 31 kii August ma aheyn mid sax ah” ayuu yiri Aadan.
Waaan hubnaa in xogta loo isticmaalay tiro-koobkan ay tahay mid hore , mana ahan mid sax ah oo waafqsan sharciga tiro-koobka ee u yaalla Qaramada Midoobay.
Cali Qorane oo ah Maayarka Gaarisa iyo Maxamed Maxamuud oo ah Maayarka Wajeer ayaa ku wehlinayey siyaasiyiinta qabtay shirka jaraa’id .
Tira-koobkii 2009-kii ayaa muujinayey in saddexda gobol Mandheera , Garisa iyo Wajeer dadka ku nool tiradoodu aheyd 2.39 milyan, laakiin tira-koobkii Isniinta ayaa lagu sheegay in dadkaas ay yihiin 2.47 milyan tasoo muujineysa kaliya kororka 80,000.
Siyaasiyiinta gobolka Soomaalidu waqooyi bari kenya